Famaranana ny frankofonia Hanahirana ny mpitandro ny filaminana
Hitohivakana manomboka anio ny fihetsiketsehana isan-karazany manodidina ny fanehoana amin�ireo vahiny rehetra mandray anjara amin�ny fihaonamben�ny frankofonia fa maro ny tsy fetezan-javatra mitranga sy efa nitranga kanefa afenimpenin�ireo mpitondra eto amin�ny firenena.
Hanomboka izany ry zareo avy ao amin’ny vondrona politika tolona fanorenana ifotony na ny TFI anio. Nanamafy ny fanambarany ireto vondrona ireto omaly fa tsy hihemotra ary hamory vahoaka etsy Analakely anio. Araka ny efa nambaran’izy ireo nialoha ny fahatongavan’izao fihaonana an-tampon’ny frankofonia izao, dia ho avy etsy amin’ny « route digue », sampanana ho any Manakambahiny koa ny avy eo anivon’ilay hetsika ho an’ny fahalalahana na MLE hampiseho ny tsy fisian’ny fahalalahana maneho hevitra eto amin’ny firenena. Ry zareo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra avy eo anivon’ny SECES moa izany dia efa nanambana ihany koa nandritry ny kaongresin’izy ireo omaly ary anio no ho hita eo ny fanapahan-kevitr’izy ireo.